Inhlangano igqugquzela ezolimo | News24
Inhlangano igqugquzela ezolimo
INHLANGANO engenzinzuzo iHarry Gwala Agri (PTY) LTD eyasungulwa commercial farmers in the Harry Gwala District Municipality of KwaZulu-Natal ngethemba lokwakha, livuselele ugqozi, bacobelelane ngamakhono, ukubaluleka kokunikezela kwesikhathi kanye nokuhlinzekela kwezezimali kwabalimi abasenza kancane.
Manje lenhlangano isikeka izinhlelo eziningi ezingaphansi kwendawo ezilwasana ukugadwa kokudla, inikezela ngoxhaso oludingekayo, ezisa abading amathuba okukhulisa ulwazi futhi isiza abalimi asafufusa.
Ingqikithi yalenhlangano ukuthi idlale indima yokuba umgqugquzeli ekuhlinzekeleni abalimi basendaweni ngamakhono azobasiza bathuthukise ulwazi lwabo ngokuba abalimi futhi babaseke ngezindlela ezihlukene ezikhona kule-project yomkhandlu.
Ngokubaphakela ulwazi mayelana nabalimi bentengiselwano, ukuxhumana ispiliyoni kanye nokufinyelela kwezezimali ukuze baqede ubumbha obubhekene nalomkhandlu.
Umphathi wale-project, uMnuz Dylan Weyer uthi lomkhandlu kanye nabalimi basendaweni baqala ukusebenzisana ekusizeni abasafufusa kodwa lokhu bekubuyeke kube inkung ngenxa yokuthi abalimi laba abantengiselwayo bamatasa kanti usizo oludingwa ilaba abasafufusa lukhulu kakhulu.
“Lenhlangano ingumama walama project ngoba iyona ephakela lawa angaphansi asemancane ngokubapha izinsiza kusebenza, ulwazi futhi ibalethela abantu okuyibona abasobasiza babaphe uxhaso,” kusho yena.
Uyivale ngokuthi lezinhlelo zamanje zixhaswe ziqukethe iznto eziningi ezahlukene okubalwa kuzo internship (in-service training) ezonikezelwa abafundi bezolimo Esayidi College eseMzimkulu, eqguqguzelwe iHarry Gwala Agri, abalimi balomkhandlu kanye namaphethelo futhi laba bafundi bazothola isibonelelo njalo ngenyanga esivela kubaxhasi eszibasiza ukuthi bazinakekele.